Hunhu, Yakasarudzika HD Mota Kamera DVR Vagadziri, Yakagadzirwa muChina - Dongguan Yingjia Electronic Technology Co, Ltd.
Imba >Zvigadzirwa >Mota yekutyaira rekodhi>HD Mota Kamera DVR
12 inch HD mota inoyerera midhiya kamera
Chigadzirwa sumo yekutengesa poindi mukana: Iyo nyowani yepamusoro-gumi nemaviri-inch inobata skrini mota DVR HD husiku chiono chemberi chegirazi kutyaira rekodhi kamera vhidhiyo rekodhi husiku chiono kutenderera midhiya mutambi. Zvese zvinhu ndezvekuchengetedza kwako chete.
8 inch desktop 4G kutepfenyura midhiya kamera
Chigadzirwa chinotengesa poindi mukana: HD mota kamera iyo inogona kuiswa padheshibhodhi, Android 8 inch 4G mota DVR kamera GPS yekufambisa ADAS FHD 1080P HD mota vhidhiyo rekodhi yehusiku chiratidzo Wifi kure yekutarisa HD husiku chiratidzo kutyaira rekodhi
4 inch 2.5D mini kubvisa mukombe kamera
Iyo yakapusa uye yepamusoro-yekupedzisira mini kamera, 4-inch HD 1080P mbiri-lens mota DVR kamera, 2.5D mini kamera yekukweva mukombe yakafara-kona 170 madhigirii, yakakwira-tsananguro rekodhi, yakanaka chitarisiko dhizaini, iri nyore mashandiro, zvese zviri zvako chete kuchengetedzeka.
12 inch 1080P HD 4G inoyerera midhiya rekodhi
10 inch yakazara inobata skrini 4G wifi ADAS yekumashure maonero girazi mota 1080P DVR kamera Android GPS navigator mbiri HD kumberi kumashure kamera. (Inesarudzo) 12 inch yakazara inobata skrini 4G wifi ADAS yekumashure yekutarisa girazi mota 1080P DVR kamera. Android GPS navigator Dual yepamusoro-tsananguro kumberi kumashure kamera. Iyo 4G WIFI vhezheni ine 10-inch yakakwira-tsananguro yehusiku chiratidzo kutenderera midhiya yekurekodha uye 12-inch mota 1080P kamera, iyo inogona kuiswa pane yekumashure girazi remota yekutanga, pamwe neepamusoro-tsananguro yekutyaira marekodhi anogona kuiswa pane dashboard Chishandiso chesarudzo yako. Zvese zvinhu ndezvekuchengetedza kwako chete.